Uthole usizo umqeqeshi ophila nokukhubazeka - Impempe
Uthole usizo umqeqeshi ophila nokukhubazeka
UThulane Ngubane noNdumiso Phungula
Akasezukulinda abazomphusha umqeqeshi osebenza emazingeni aphansi ebhola kuleli ophila nokukhubazeka njengoba esenikelelwe ngesihlalo esihamba ngamasondo esizihambelayo.
UNduduzo Phungula waseMsinga esizweni sakwaMabaso uthole uxhaso kusomabhizinisi waseMabomvini esigodini sakwaDolo khona eMsinga, uThabane Ngubane.
UNgubane uzinze eMgungundlovu ngokomsebenzi njengoba engomunye wabaphathi benkampani eyenza iziqohlo zokunukisa kamnandi i-Athur Ford.
UNgubane uthe wathinteka ngesikhathi efunda udaba lukaPhungula kwiMpempe. Akabange esacabanga kaningi, waqoka ukuba afake isandla ephaketheni atholele uPhungula isihlalo esinamasondo esizihambelayo.
“Usizi lokweswela yinto engiyaziyo mina, ngakho kuthe uma ngifunda ngesimo esibhekene nomfoka Phungula kwangifikela ukuthi mangisize,” kusho uNgubane.
Ube esehlaba ikhwelo nakwabanye osomabhizinisi ebanxenxa ukuthi balule isandla kwabampofu bangagodli izandla.
“Uma unawo amandla, kumele usize kulabo abangakwazi ukuzisiza,” kuchaza uNgubane.
UPhungula wakhubazeka esengumfanyana esadlala ibhola. Uthi wayengumgadli kanti walimala kanzima emgogodleni kade ethi uyagqosha bedlala emakhaya ngakubo.
“Nganginamaphupho okuzibona ngidlala kwiPSL ngelinye ilanga. Lalinconywa nethalente lami futhi bengitshela ukuthi ngingagcina ngifikile kwiPSL uma ngizimisela.
“Laphela ngokucwayisa kweso kanjalo-ke ikusasa lami ekudlaleni,” kuchaza uPhungula.
Uthi wabe eseqoka ukusiza abafana abasebancane ukuze bakwazi ukufeza leli phupho yena angeke esakwazi ukuliphila. Njengoba engumqeqeshi, uthi bekunzima ukuya kweminye imidlalo kwazise bekumele alinde abazomsiza.
“Iqembu lami lihlezi phezulu kwilogi njengamanje, senza kahle kakhulu futhi sibheke uuya emidlalweni yokuhlunga ngoba sinezifiso ezinkulu,” kusho yena. Unezitifiketi zokuqeqesha zeSAFA Level 3.
Emavikini amabili edlule, uNgubane unikele ngezimpahla zesikole nezinye izinsiza ezinganeni eziswele zaKwaDolo Combined High School. Wayehambisana nomgijimi odumile, uBongumusa Mthembu ngenhloso yokugqgquzela abantwana ukuthi nabo bengagcina beyizinto ezinkulu yize impilo ibukeka ibaphika okwamanje.
Previous Previous post: Bacikwe ‘ukuphupha’ kweChiefs bamashela eNaturena abalandeli
Next Next post: Ubuyele kwiBafana uNtseki, useyiphini likaBroos